Ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny Filoha Rajoelina ny alahady 9 aogositra teo anefa dia hoe: miverina miasa sy mamonjy toeram-piasana? Mazava izany fa tsy misy famonjena ny toeram-piasana sy ny toeram-pivoriana aloha izany an’ny mpitondra ambony. Mazava io hoe ny mpitondra dia mbola matahotra sy miaro ny tenany mafy, fa ny vahoaka kosa nomena fahafahana aloha satria atahorana hitroatra eo anatrehan’ny efa fahasahiranana tsy roa aman-tany mahazo azy. Mila mitandrina ny isam-batan’olona satria mbola eto ny valanaretina, ary mety ho azo lalaovina ny antontan’isa hahafaha-milaza fa voafehy na efa midina ny taham-pahavoazana. Tsy mbola tafavoaka ny ala isika, ka zava-dehibe ny fahaizana miaina sady mamokatra no miaro tena satria tsy manan-tsafidy ny vahoaka mila mivelona sy mila mitady izay harapaka, fa tsy tahaka ny mpitondra toa mamboly voky tsy mamboly voky.